Wasiirka caddaaladda Puntland oo soo xiray Tartan aqooneedka Kediska Kobciye ee Raadiyo Sahan (Sawirro) | SOMALI SUN |
Wasiirka caddaaladda Puntland oo soo xiray Tartan aqooneedka Kediska Kobciye ee Raadiyo Sahan (Sawirro)
Jul 7, 2017 - Aragtiyood
Garowe – Idaacadda maxaliga ah ee Sahan ee magaalada Garowe ayaa maanta soo geba-gebaysay tartan aqooneedka Kediska Kobciye oo ay qabato bisha Ramadaan. Tartankan ayaa ahaa mid noociisu cusub yahay oo ay ku tartamayeen shakhsiyaad meelo kala duwan idaacada kala soo xiriirayay si furan oo caddaalad ah.
Cabdullaahi Cali Cabdullahi oo ah 18 jir dhigta dugsiga sare ee Gambool ee Garowe una tartamayay si madax-banaan ayaa kaalinta koowaad ka galay dhibco tirsigii Kediska Kobciye ee Raadiyo Sahan, sidoo kale Cabdullahi Cabdinuur iyo Cabdiweli Axmed Cumar oo heer dugsi sare ah ayaa kala galay kaalimaha labaad iyo saddexaad ee tartankan.
Wasiirka caddaaladda, diinta iyo Aw-qaafta ee dowladda Puntland Saalax Xabiib Jamac oo ka qayb-galay munaasabadda hadalna ka jeediyay ayaa boggaadiyay Tartanka iyo tartamayaasha. Dabadeed wasiirku wuxuu tartamayaasha guddoonsiiyay aqoonsiyo loogu tala-galay oo lagu xaqiijinayay kartidooda.
Sheikh Mukhtaar Axmed Faarax oo Guddoomiye u ah mu’asasada Al-minhaaj ayaa isna abaal-marino dhaqaale iyo hadiyado kale oo ay bixiyeen Idaacadda Sahan, mu’asasada Al-minhaaj wuxuu guddoonsiiyay saddexda guulayste ee tartanka ku soo baxay. Jubba Water Company ayaa iyana sidaas oo kale abaal-marin qiimo leh waxay guddoonsiisay guddigii Tartankan hoggaaminayay.
Hay’adda SFS oo iyadu tartanka marti-gelinaysay ayaa iyana shahaado sharafyo siisay mu’asasada Al-minhaaj iyo shirkadda Jubba Water Company doorkooda taageero iyo maal-gelineed ee kediska Kobciye.
“ujeedadu waxay ahayd in la abuuro fursad baaxad leh oo aqoon is weydaarsi ah, in kor loo qaado garaadka iyo wacyiga dhalinyarada, iyo in ay bulshadu ku nastaan barnaamijka galab walba maadama ay Rammadaan ahayd. Wuxuu ahaa mid aad u xiiso badan oo ay adkayd fursadiisa ka qayb-gal in si fudud lagu soo galo,” ayuu yiri Cabdulmajiid Cali Faarax, gudoomiyaha guddiga Tartanka ee Raadiyo Sahan.
Agaasimaha Sahan Cabdiraxmaan Maxamed Xaaji ayaa munaasabada ka sheegay in Tartamada noocaan ah ay idaacaddu sii wadi doonto isla markaasna ay ugu tala-gashay in ay ku horumariso wacyiga bulsho ee dhinaca aqoonta. Wuxuu xaqiijiyay in baaxadda idaacadda ee gobollada Sool iyo Nugaal in ay tahay fursad weyn oo ay dhegaystayaasha ku xiran ugu abuuri karaan doodo isbedel dhalin kara.
Wasiirka caddaaladda Puntland, taliyaha la dagaalanka argagixisadda Gen. Muxyadiin, Kusimaha Agaasimaha hay’adda SFS, culimo iyo madax kale oo ka socday shirkadaha ganacsiga ayaa ka qayb-galay munaasabadda lagu soo xirayay tartanka kediska Kobciye ee idaacadda SAHAN.